La kulanka Madaxweyne Garguurte oo lacag ku xiran- Digniin uu bixiyay !
Topnews:La kulanka Madaxweyne Garguurte oo lacag ku xiran- Digniin uu bixiyay !
02 March 2013 Waagacusub.com-Laba ka mida hoowlwadeenada Xafiiska Madaxweynaha Somalia oo lagu kala magacaabo Ibrahim Sheekh Muxyadiin iyo kamaal Dahir Gutale ayaa la ogaaday inay lacago laaluusha ka qaateen dad doonayay inay la kulmaan Madaxweyne Hassan Mohamud Alasow. Xildhibaan Cabdirisaaq oo u dhashay beesha Isaaq ayaa Waagacusub u sheegay in Ibrahim Sheekh Muxyadiin oo ah Madaxa Baratakoolka Madaxweynaha uu ka qaatay lacag dhan sedex kun oo Dollar hasse yeeshee uu la kulansiin waayay Madaxweyne Hassan sidii heshiiska dhigayay.
"Xilligii Wasiiro ku xigeenada la magacaabayay ayuu lacagta iga qaatay,waxaan doonayay inaan Madaxweynaha la kulmo,wuxuu Ibrahim Sheekh Muxyadiin igu dhahay anigaa kula kulansiinaa kana dhameeynaa Wasiir ku xigeenkaaga ee maxaad heysaa ,kadib waxaan siiyay lacag sedex kun ah laakiin nasiib daro ilama kulan siin" ayuu yiri Xidlhibaan Cabdirisaq oo ka gaabsaday inuu arkay dad kale oo sidaas lacag looga qaatay.
Dad u badan Ganacsato iyo Siyaasiyiin ayaa Waagacusub u sheegay inay lacago laaluusha siiyeen Ibrahim Sheekh iyo Kamaal Dahir Gutale si ay Madaxweynaha ula kulmaan.
Madaxweyne Hassan Garguurte ayaa digniintii ugu dambeeysay siiyay Kamaal Dahir kadib markii uu ka dulgeeyay dad uu ka dhuumanayay oo ka doonayay lacagta duugta Xildhibaan Sheekh Cali Nur Adan oo Muqdisho ku geeriyooday.
Odayaasha iyo Xildhibaanada ayaa Madaxweynaha weydiistay inuu ka bixiyo Deymo lagu lahaa Marxuumka iyo lacag dhan Shan kun Dollar oo duugtiisa ah.
Sheekh Cali Nur Adan wuxuu ahaa Wasiirkii hore ee Diinta iyo Awqaafta hasse yeeshee Madaxweyne Hassan wuxuu Masuuliyiinta u sheegay inuu haba yaraatee wax lacaga heysan.
" La kulankiisa wuxuu Kamaal Dahir nooga qaatay lacag dhan seddex boqol Dollar hadana nasiib daro wuxuu Madaxweynaha nagu dhahay waxba idiinma hayo" ayey yiraahdeen Odayaashii Marxuum Cali Nur.
Madaxweyne Hassan oo aad uga carooday Odayaasha iyo Xildhibaanada uu Kamaal Dahir ka dulgeeyay ayaa Digniin kama dambeysa siiyay .
"Laba jeer ayaan hore kuugu digay tan waa kama dambeys,hadii aad qof dambe iga dul keento Albaabka ayaad ka baxeeysaa" ayuu Madaxweyne Hassan ku yiri Kamaal sida ay Waagacusub ugu xog warameen goobjoogayaal aad loogu kalsoon yahay macluumaadkooda.
Inkastoo laaluush qaadashada ka siman yihiin Kamal iyo Ibrahim hadana maaha laba la isbarbardhigi karo.
Ibrahim Sheekh Muxyadiin oo ka soo jeeda Qabiilka Warsaengeli Abgaal wuxuu leeyahay taariikh Kooban .
Ibrahim waa Korneyl ka tirsanaan jiray Ciidamadii Somalia ,wuxuu dagaaladii Sokeeye ahaa Ilaalada gaarkaa ee Cali Mahdi Mohamed.
Ibrahim wuxuu noqday Ganacsade wuxuuna ka mid noqday Gudiggii Dekadda Ceelmacaan ee MMD isagoo marna madax ka noqday Dekadda.
Intii u dhaxeysay Mohamed Dheere iyo Mohamed Cisman Dhagaxtuur ayaa Korneyl Ibrahim Sheekh laga dhigay Gudoomiyaha Gobolka Banadir iyo Duqa Muqdisho.
Kamaal Dahir Gutale wuxuu u dhashay Saleebaan Habargidir mana lahan taariikh dheer hasse yeeshee Warbixin gaara ayaan uga sheekeeyn doonaa ardaynimadiisii Sudan iyo sidii shaqada Madaxtooyadda lagu geeyay.